Pele နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမား Mbappe
16 Jul 2018 . 12:38 AM
ပြင်သစ်အသင်း လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမား ဘာပေ Mbappe ဟာ ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ပီလီ Pele နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာပေဟာ ခရိုအေးရှားကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ ပြင်သစ်အသင်းအတွက် စတုတ္ထမြောက်ဂိုးကို (၆၅)မိနစ်မှာ သွင်းယူခဲ့ပြီး ဒီလို စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကို ရရှိခဲ့တာပါ။
ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး ပီလီဟာ ၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် ဆွီဒင်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး အဲဒီတုန်းက သူ့ရဲ့အသက်က (၁၇)နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ အခုဘာပေက (၁၉)နှစ်အရွယ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ ဂိုးသွင်းခဲ့တာဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက် ဗိုလ်လုပွဲကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ တတိယမြောက် ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ဘာပေမတိုင်ခင်က ၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ပီလီ(ဘရာဇီးလ်-၁၇နှစ်)၊ ၁၉၈၂ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ ဘာဂိုမီ Bergomi (အီတလီ-၁၈နှစ်)တို့က အသက်အငယ်ဆုံးကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲကစားခဲ့တဲ့သူတွေအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပေဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ (၄)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ်။
Pele နောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ဆယျကြျောသကျကစားသမား Mbappe
ပွငျသဈအသငျး လူငယျကွယျပှငျ့ကစားသမား ဘာပေ Mbappe ဟာ ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျကစားသမား ပီလီ Pele နောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဆယျကြျောသကျကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဘာပဟော ခရိုအေးရှားကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ ပွငျသဈအသငျးအတှကျ စတုတ်ထမွောကျဂိုးကို (၆၅)မိနဈမှာ သှငျးယူခဲ့ပွီး ဒီလို စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတဈခုကို ရရှိခဲ့တာပါ။
ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး ပီလီဟာ ၁၉၅၈ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲအဖွဈ ဆှီဒငျနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ အသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး အဲဒီတုနျးက သူ့ရဲ့အသကျက (၁၇)နှဈပဲရှိပါသေးတယျ။ အခုဘာပကေ (၁၉)နှဈအရှယျနဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ ဂိုးသှငျးခဲ့တာဖွဈသလို ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးတဈလြှောကျ ဗိုလျလုပှဲကစားခှငျ့ရခဲ့တဲ့ တတိယမွောကျ ဆယျကြျောသကျကစားသမားအဖွဈလညျး မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ ဘာပမေတိုငျခငျက ၁၉၅၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ပီလီ(ဘရာဇီးလျ-၁၇နှဈ)၊ ၁၉၈၂ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ ဘာဂိုမီ Bergomi (အီတလီ-၁၈နှဈ)တို့က အသကျအငယျဆုံးကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲကစားခဲ့တဲ့သူတှအေဖွဈ ရပျတညျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဘာပဟော ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ (၄)ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲရဲ့အကောငျးဆုံးလူငယျကစားသမားဆုကိုလညျး ဆှတျခူးနိုငျခဲ့တယျ။
by Naing Linn . 38 mins ago